Dainik Headlines - Page3of 490 - Nepali Khabar from Nepal
March 4, 2019	Healthy Life 0
आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसैले छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टिबायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने प्राकृतिक संक्रमणलाई रोकथाम गर्दछ। यदि बेसार र दुधलाई मिसाएर सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरलाई यस्ता फाइदा हुन्छन्ः …
March 4, 2019	Dharma 0
भगवान शिवका पिता को हुन? निकै कौतुहलता जगाउने यो प्रश्न जस्तै उत्तर पनि त्यतिनै रोचक छ।मानिनै आएको छ कि शिवको मातापिता छैनन। शिव अनादी अनि अनन्त छन्। शिवको कुनै जन्म छैन अनि अन्त्य पनि। एक पटक एक सन्तले शिवलाई सोधे, ‘हे प्रभु! तपाइको पिता को हुनुहुन्छ?’ भगवान शिवले भने, ‘ब्रह्मा …
आज शिवरात्री पशुपति नाथको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस् हजुरको दिन सिद्ध रहनेछ।
March 4, 2019	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): सानातिना घरायसी समस्याहरू देखिए पनि तिनले दैनिकीमा खास फरक पार्ने स्थिति छैन । जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुनसक्छ, तर अन्त्यमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) : तर्कवितर्क, वादविवाद, छलफल र पढाइलेखाइका क्षेत्रमा …
हरेक दिन तपाइले घरमा धनदौलतको कमी हुन नदिन यसरी पूजा गर्नुस्
March 3, 2019	Dharma 0
हरेक मानिसले सुखी र समृद्ध जीवनका लागि देवीदेवताको पूजन गर्ने परम्परा पुरानो समयदेखि चलिआएको छ । आज पनि धेरै मानिस यो परम्पराको निर्वाह गर्छन् ।पूजा गर्दा हाम्रा मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् । तर पूजा गर्दा केही खास नियम पालन गर्नुपर्छ नत्र पूजाको शुभ फल प्राप्त हुँदैन । पूजा गर्दा चुकियो भने …
March 3, 2019	Healthy Life 0
दाद एक सरुवा रोग हो र यो सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा जनावरसँगको लसपसबाट सर्दछ। केवल छालाको स्पर्शबाट मात्र नभएर यो रोग साझा कपडाको प्रयोग र जुठो खानाबाट पनि सर्दछ। सरुवा रोग र खतरनाक सङ्क्रमण भएकै कारणले दादलाई निको पार्न मुश्किल पर्दछ र समय लाग्न सक्दछ। यसलाई निको पार्ने मेडिकल क्रिम तथा …
लसुन र मह मिलाएर खानुहोस्, पाउनुहुनेछ चमत्कारीक फाइदा !
लसुन र मह (हनी)को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान्। हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ। लसुन मसलामात्रै नभएर यो भान्साको औषधि पनि हो। यसले शरीरका अनेक विकारलाई शुद्धीकरण गरेर अनेक खाले इन्फेक्सन कम गर्नसमेत सहयोग गरिरहेको हुन्छ। लसुनले मानिसको पाचनक्रियालाई समेत फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। बनाउने तरिका दुई, …
March 2, 2019	Dharma 0
कलियुगका लागि भागवत पुराणमा बिभिन्न आश्चर्यजनक भबिष्यवाणीहरु गरिएका छन्। संसारमा प्रलय आउने छ भनि बिभिन्न समयमा आउने हल्लाखल्ला हामीले नसुनेका छैनौं। कालान्तरमा कुनै दिन हामी वरिपरिको वस्तुहरु रहने छैनन्, पृथ्वी वञ्जर हुनेछ। जीवको लागि आवश्यक पानी सुकेर जानेछ र पृथ्वी केवल ढुङ्गा र माटोको पिण्ड रहनेछ। तर सत्य के हो, …
March 1, 2019	Healthy Life 0
हामीले अनुभव गरेकै छौं, जाडोमा कपालमा चाया पर्छ । तुलनात्मक रुपमा बढी जाडो याममा चायाले सताउँछ। जाडोमा दिनदिनै नुहाउन संभव हुँदैन । त्यसमाथि टाउकोलाई न्यानो बनाउन टोपी लगाइन्छ, स्कार्फले टाउको ढाकिन्छ। यसले गर्दा कपालको सौन्दर्य रुखो हुन्छ । चाया पर्छ । यतिबेला खास हेरचाहको अभावमा कपालमा अनेकौ समस्या आउँछ। चाया …
हामीले दैनिकरुपमा विभिन्न प्रकारका फलफूल उपभोग गर्छौं। फलफूल हाम्रो खानाको एक प्रमुख हिस्सा बनिसकेको छ। विभिन्न किसिमका फलफूलमा बेग्लाबेग्लै स्वाद र बेग्लाबेग्लै पोषण तत्व पाइने गर्छ। फलफूलमा मानिसलाई चाहिने भिटामिन र खनिज पदार्थ धेरै मात्रामा पाइन्छ। तर, फलफूलमा पौष्टिक गुणका साथै औषधीय गुणहरु पनि पाइन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन …
February 28, 2019	Healthy Life 0
मेवा स्वादिलो तथा स्वास्थ्यवर्धक फल हो । विज्ञका अनुसार मेवाको फल मात्र हैन रुख नै औषधि गुणले भरिएको छ। यसको प्रयोग रगतको कोलस्टेरोल मात्रा घटाउनेदेखि वाकवाकी लाग्नेसम्मका समस्याका लागि लाभदायि मानिन्छ । आज हामी तपाईलाई मेवाका फाइदाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ १ छालामा मेवा छालाका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ, यो फेसप्याकको …